သတင်း Archives - Page6of6- Channel Lover
သရုပျဆောငျ မငျးမျောကှနျးက သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာကနေ ရေးလိုကျတဲ့စာ
February 3, 2021 by Channel Lover
သရုပျဆောငျ မငျးမျောကှနျးက သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာကနေ ရေးလိုကျတဲ့စာ ၈၈ တုနျးက အဖေ တို့ဆနျ့ကငျြခဲ့ပွီးပွီ အခု ၂၀၂၁ မှာတော့ ကြှနျတျောတို့အလှညျ့ပါ အာဏာရှငျ စဈအစိုးရ လုံးဝ လုံးဝ အလိုမရှိ #photo မငျးမျောကှနျး #မငျးမျောကှနျး #မိုးသောကျကွယျ zawgyi code သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်းက သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာကနေ ရေးလိုက်တဲ့စာ ၈၈ တုန်းက အဖေ တို့ဆန့်ကျင်ခဲ့ပြီးပြီ အခု ၂၀၂၁ မှာတော့ ကျွန်တော်တို့အလှည့်ပါ အာဏာရှင် စစ်အစိုးရ လုံးဝ လုံးဝ အလိုမရှိ #photo မင်းမော်ကွန်း #မင်းမော်ကွန်း #မိုးသောက်ကြယ်
November 1, 2020 by Channel Lover
သိန်းငါးထောင်ဆုရှင် ထွက်ပေါ် သိန်းငါးထောင်ဆုရှင် ထွက်ပေါ် အပိုင်သေချာတဲ့ မန္တလေး ခိုင်ရွှေဝါ ထီဆိုင်ကြီး မှ ၂၁ ကြိမ်မြောက်ရဲ့ သိန်း ၅၀၀၀ ကံထူးရှင် တွေ့ပါပီဗျာ ရွှေဘိုမြို့နယ် ဆိပ်ခွန်ရွာ. နေတိုးလှိုင် ခိုင်ရွှေဝါထီဆိုင် unicode သိနျးငါးထောငျဆုရှငျ ထှကျပျေါ သိနျးငါးထောငျဆုရှငျ ထှကျပျေါ အပိုငျသခြောတဲ့ မန်တလေး ခိုငျရှဝေါ ထီဆိုငျကွီး မှ ၂၁ ကွိမျမွောကျရဲ့ သိနျး ၅၀၀၀ ကံထူးရှငျ တှပေ့ါပီဗြာ ရှဘေိုမွို့နယျ ဆိပျခှနျရှာ. နတေိုးလှိုငျ ခိုငျရှဝေါထီဆိုငျ
၂၁ကြိမ်မြောက်သိန်းတစ်သောင်းကံထူးရှင် ပခုက္ကူခိုင်ရွှေဝါထီဆိုင် ပိုင်ရှင် ဦးဇော်နိုင်မှ ရောင်းမကုန်သည့် ထီလက်ကျန်မှ သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး ဆွတ်ခူး သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ဌ ၁၁၁၉၃၇(ခိုင်ရွှေဝါ) သိန်းတစ်သောင်း ယ ၅၃၉၃၅၄ သိန်းငါးထောင် ဝ ၃၇၅၆၀၁ ကဂ ၉၀၄၉၇၀သိန်း၂ဝဝဝဆု ဓ ၆၇၄၆၈၉ ဂ ၃၉၃၂၀၃ အ ၁၀၁၄၃၆ သိန်း၁ဝဝဝဆု အ ၁၃၀၈၂၁ ကခ ၅၂၂၁၅၂ ဒ ၇၁၅၀၆၆ သ ၇၅၈၅၂၂ ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၃) သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း၅လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည် ဇ ၅၃၄၉၆ ကင ၂၂၅၄၁ ဃ ၃၈၅၆၈ ယ ၃၁၂၂၂ ကဃ ၉၇၃၅၄ ဟ ၂၁၄၆၉ ယ ၅၆၅၂၅ … Read more